Kormeeraha ciyaaraha, tababarka isboortiska ee waxbarashada waqti-dhiman
Waxaad ka dhigi kartaa isboorti
Tababarka kaliya ee la xiriira cayaaraha ee BSO (waxbarashada dugsiga sare).
Isboorti ma leh, laakiin cayaaraha isboortiga
Maadaama aad tahay tababaraha isboortiga waxaad ka caawin doontaa macalinka ama tababaraha ee ciyaaraha isboortiga ee la socda. Waxaad siisaa taageero taakuleeyn iyo caawimaad si loo hubiyo badbaadada iyo ladnaanta cayaaraha. Maadaama aad tahay tababare isboorti waxaad u shaqeysaa si madaxbannaan, amaan ah iyo qaab cayaareed oo mas'uul ka ah. Waxaad ka shaqeyneysaa kormeer toos ah ama aan toos aheyn oo kormeer ah iyo sida uu tilmaamayo qofka mas'uul ka ah.
Waa inaad awood u yeelatid inaad si fiican wax uga qabato dadka iyo gaar ahaan carruurta iyo dhalinyarada. Waxaad ka shaqeysaa jawi isboorti sidaa daraadeed waa muhiim inaad adigu naftaada ku haboon tahay oo aad ku tababarto isboorti. Labada ciyaaryahan ee ugu sareeya ciyaartoyda iyo cayaaraha madadaalada ayaa lagu soo dhaweynayaa tababarka. Xoogga saarista ayaa ah in la hagaajiyo dadka kale oo aan ku jirin ciyaaraha. Waxaan hubineynaa in aad ka baratay dhamaan cayaaraha aad u baahan tahay in aad dadka kale baro.
Spectrumschool waxay leedahay qaybo isboorti oo ballaaran oo ku yaalla xayndaabkeena iyo meelaha ku hareeraysan. Taasi waa hantida weyn ee dugsigeena.
Caaro ... Sidoo kale eeg eesn tababarka isboortiska ee TSO baro + inaad barato.
Tababaraha isboortiga tababarka, xooga waa ku taageeraya ciyaartoyda kale. Waxaan idin barayaa in isboortiga; aad u ogaato sharciyada by wadnaha iyo aad nooleyn kara ciyaartoyda. waxqabadka Your ciyaaraha fudud yihiin sare hagaya dadka kale.
In maadooyinka guud hesho wax ka mid ah wixii la siiyo sannad ka 3e ilaa sanadkii 7e ee waxbarashada xirfadda waqti-buuxa ah. Waxa kale oo aad ka heli baray Ingiriisi.
tababarka Tababaraha sports qaadataa laba ilaa saddex sano.
Iyada oo shahaado ah Tababaraha sports Waxaad heli kartaa bilaabay degmooyinka iyo maamulayaasha goobaha isboortiga.
Barnaamijku wuxuu kaloo u fiican tahay a xirfad badbaado.
Uma baahnid wax aqoon ah oo gaar ah oo ku saabsan koorsada tababarka isboortiga.
Waa maxay macalinka ciyaaraha?
Dibloomadaas waxaad sii wadan kartaa barashada. Xasuuso in daraasad dheeraad ah aysan ahayn ujeeddada koowaad ee tababarka xirfadda. Ujeedada tababarka xirfadeed waa inuu kuu diyaariyo suuqa shaqada. Sidaa darteed waxaanu bixinaa taxadar badan oo ku saabsan xirfadaha aad u baahan tahay si aad u awooddo inaad shaqeyso.
Intaa waxaa dheer in aad sidoo kale raaci kartaa hal maalin toddobaadkii koorsooyinka guud sida manhajka waxbarashada xirfadaha. Maadooyinka guud waxaad ku qaadan kartaa shahaadada labaad, shahaadada saddexaad ama xataa kasban aad shahaadada dugsiga sare.
Nala soo xiriir via bogga internetka ama telefoonka. Waxaad mar walba ku boodaan kartaa in hal mar inta lagu jiro saacadaha dugsiga.